Payraise Calculator Ongororo
Mugovera, Nyamavhuvhu 12, 2006 Douglas Karr
Imi vanhu mungatadza kufunga kuti izvi zvinonakidza sezvandinoita, asi ichi ndicho skrini yema hits angu pa Payraise Calculator. Ini chaizvo ndinowana zvichinakidza kuti zvese zvinorova zviri mukati mevhiki uye zvisingaite chero paweekend. Ini ndinofungidzira ndine maviri marudzi evashanyi, avo vanoverengera kukwidziridzwa kune mumwe munhu kana avo vanoverengera kukwira kwavo. Ndingadai ndakafunga iro rekupedzisira boka raizove kutarisa zvinhu seizvi kunze kwevhiki… asi handifungi.
Ndoziva ini ndoda kubvisa saiti yekuwana mhedzisiro mune popup! Gore rino, pamwe. 🙂
Blogs, Clogs uye Nhaurwa
Sep 23, 2009 na1: 25 PM
Kune avo vanoda kuziva… ino ndiyo nha. 1 saiti yekuverenga muhoro wako! Ini ndinokurudzira zvikuru. Ini nguva pfupi yadarika ndakagamuchira mubairo wekuwedzera pamwe newedzero yekuwedzera yaive nechokuita nepenjeni. Ndakaverenga zvikamu zvakabatanidzwa uye ndakagamuchira iyo chaiyo ruzivo rwakaratidza pamubhadharo wangu. Mazvita, mukanyiwa, nekupa chishandiso chakakosha ichi.